2013 ~ Myanmar News Updates
Online Business လုပ်ကြမလား..?
12:21:00 PM Myanmar News Updates 1 comment
တစ်ချို့ တလေကတော့ ဒီနည်းလမ်းတွေကို သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး တစ်ခုကို မိမိ အိမ်ကနေ အင်တာနက် ရှိရုံနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ပါ။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဒီလို နည်းလမ်းတွေဟာကိုယ်ပိုင် အားတဲ့ အချိန်တွေမှာ တစ်ဖက် တစ်လမ်းကနေ ၀င်ငွေရှာနိုင်ဖို့လုပ်ကိုင်တတ်ကြပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှင် မိခင်တစ်ယောက်က ကလေးထိန်းရင်း အလုပ်လုပ်နိုင်သလို ၊ ကျောင်းတက်နေရ တဲ့ ကျောင်းသားတွေကလည်းသူတို့လိုအပ်တဲ့ ကျုရှင်ကြေးကို ရှာဖွေနိုင်မယ်။ လူငယ်တွေကလည်း အိမ်မှာ လုပ်နိုင်တဲ့ အွန်လိုင်း စီးပွားရေး တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါမယ်။
(၁) – ဘလော့ရေးခြင်း
အွန်လိုင်းကနေ အလုပ်လုပ်ဖို့ အတွက် အလွယ်ဆုံး နဲ့အစောဆုံး စတင်ခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံ ရှာတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါ တယ်။ ပထမဆုံးကတော့ စာရေးရတာ မျှဝေရတာ ၀ါသနာ ပါတဲ့ သူ ဖြစ်ရပါမယ်။ မိမိ အားသန်တဲ့ လိုင်း တစ်ခုခုကို ထိထိရောက်ရောက် ရေးသားရပါမယ်။
ဒါဟာ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခု ဆိုရင် သင့် ဖောက်သည် စာဖတ်သူတွေကို ဘယ်လို ကောင်းမွန်တဲ့ စာကောင်း ပေကောင်း အရေးအသားကောင်းတွေ မျှဝေနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ သင့်အရည်အချင်း အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ နည်းပညာအကြောင်း ရေးမလား ၊ ဗဟုသုတအကြောင်းရေးမလား ၊ အစားအသောက် အချက် အပြုတ်၊ ခရီးသွားတဲ့ အကြောင်း .. အိုး စုံလို့ ပါပဲ ။ တစ်ခုရှိတာက ဘယ်အရာမှ ချက်ချင်း စိုက်ပျိုးပြီး ချက်ချင်း စားသုံးလို့မရနိုင်တာကို သိရပါမယ်။ တစ်ခုခု ကို ဇောက်ချ ရေးသား တင်ပြသွားပါ။ အခုဆိုရင် ဆိုရှယ် နက်ဝေါ့တွေကလည်း အားကောင်းနေတာ ဆိုတော့ မိမိ နက်ဝေါ့မှာ မိမိပရိသတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားရပါမယ် ။ မိမိ အနေနဲ့ ပေါ်ပင် လုပ်တဲ့ စိတ်ရှိရင်တော့ အစကထဲ က ဖျောက်စေချင်ပါတယ်။ ဒါက စေတနာ နဲ့ အချိန် ပေးပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံရတဲ့ အလုပ် ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တစ်ခု အတိုင်းအတာ တစ်ခု ရောက်တဲ့ အခါမှာ Out come အနေနဲ့ 
သင့်မှာ အကျိုးအများကြီး ရရှိ ပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံး မိမိ အရေးအသား Skill ရှိလာပါလိမ့်မယ် ။ အသိပညာ ကြွယ်ဝလာပါလိမ့်မယ်။ နောက် ပရိသတ်တွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခြေ အနေမှာတင် ၀င်ငွေရနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂူဂဲလ် ရဲ့ ဘလော့ က ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်တဲ့ Adsense ကို အသုံးပြုပြီး User Traffic နဲ့ပိုက်ဆံယူမလား ။ အွန်လိုင်း Advertising ၀န်ဆောင်မှု နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Pay Per Click နဲ့ဝင်ငွေ ရှာမလား…။ ရနိုင်ပါတယ်။
(၂) – အွန်လိုင်း မာကတ်တင်း
ဒါကို Affiliate Marketing လို့ လည်း ခေါ်ပါတယ် ။ ပြောရရင် စုပေါင်းချိတ်ဆက်ပြီး ကိုယ်ဘက်ကနေ ကုမ္မဏီ အတွက် တဆင့်အွန်လိုင်း မာကတ်တင်း ဆင်းပေးတဲ့ သဘောပါ ။
ကုမ္မဏီ တစ်ခုခုရဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကို social media platform တွေ အသုံးပြုပြီး ကြော်ငြာပေးတာတွေ ၊ ဝဘ်ဆိုက်မှာ တင်ပြီး ကြေငြာပေးတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Social Media မှာကတော့ Facebook လိုမျိုးမှာ Page လုပ်ပြီး ကြေငြာတာတွေ တွေ့ဖူးကောင်း တွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ ဆိုရင် နာမည်ကြီးတဲ့ ဆိုက်တွေ မှာ ကြော်ငြာပေးတာတွေ ၊ ပရိုမိုးရှင်း ဘာညာ သာရကာတွေ တင်ပေးတာတွေ လုပ်ရပါတယ်။
မိမိ ကြော်ငြာပေးရတဲ့ ကုမ္မဏီ က နာမည်ကြီး Brand တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မိမိ Local အတွက် ထိုးဖောက်ပြီး ကြေငြာပေးရတယ် ဆိုရင် ထိုမာကတ်တင်း ဆင်းလို့ တက်လာတဲ့ အမြတ်ရဲ့၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၀ အထိ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါက နိုင်ငံတကာ က ပေးတဲ့ နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) – Review ရေးပေးခြင်း
Samsung က အသစ်ထွက်တဲ့ Smart Phone တစ်လုံးအကြောင်း သုံးစွဲပုံ အမြင်လေး ရေးပေးရမယ် ဆိုပါတော့ ။ ဖြစ်သင့်တာက ထို စမတ်ဖုန်းကို ကိုယ်တိုင် ကိုင်တွယ် အသုံးပြုကြည့် ။ ပွတ်ကြည့် ။ App တွေကလိကြည့်။ စသဖြင့် ကိုယ် ကြုံတွေ့ လာရတဲ့ အကြောင်းအရာ Product ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ အနှစ်သာရတွေကို ရေးသားရပါတယ် ။ ဒါက သဘော ပြောပြတာပါ ။ ဒီနေရာမှာ အလှကုန်ပစ္စည်း အသစ် ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။
အိမ်သုံးပစ္စည်း ၊ လူ့ အသုံးအဆောင် တစ်ခုခု ၊ အစားအသောက် ထုတ်ကုန် အသစ် အားလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိ ရေးသားထားတဲ့ Review ကို အွန်လိုင်းမှာ တင် ။ ဒီလိုနဲ့၎င်းကုမ္မဏီများရဲ့ Product များဟာဖောက်သည်များကို မ၀ယ်ယူ ၊မသုံးစွဲရသေးခင် အွန်လိုင်းမှာ တင်ထားတဲ့ မိမိ Review ကို လေ့လာပြီးနောက် ပိုမိုအရောင်း သွက်လာတဲ့အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ နှုန်းနဲ့ ပဲ ပြန်တိုင်းရလျှင် Review ရေးသားခဟာ မိမိ ကျွမ်းကျင်မှု ၊ အရေးအသားကောင်းမွန်မှု အပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ပုဒ်ကို ဒေါ်လာ ၂၀ ကနေ ၂၀၀ အထိ ရရှိပါတယ်။
(၄) – Web Desiging and Developing
ဒါကတော့ Professional ဆန်တဲ့ လိုင်းတစ်လိုင်း လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Web Designer နဲ့Develper အတွက် လိုအပ်တဲ့ Skills များကို သင်ယူတက်မြောက်ပြီး မှ လုပ်နိုင်မဲ့ Online ဆက်စပ်အလုပ် တစ်ခုလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Programming အကြောင်း နားလည်ရမယ် ။ ဒီဇိုင်းတွေကို ဖန်တီးနိုင်ရမယ် ။ မိမိ ပြုလုပ်မဲ့ ဆိုက်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လို ဖန်တီးမလဲ ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ ရှိရပါမယ် ။ ဒါကလည်း ကုမ္မဏီ မှာလည်း လုပ်ကြသလို Freelance အနေနဲ့ လည်း Out source တွေ ရှာပြီး အိမ်ကနေ လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Network ကလည်း ကောင်းရပါမယ် ။ ဒီလိုမျိုးကတော့ အိမ်က လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်မှန်ပေမဲ့ Team Work ကို အားပေးတဲ့ ကျနော် အနေနဲ့ တော့ Social ကျအောင် နေဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ သိတဲ့ အတိုင်း Freelance သမားများအနေနဲ့Asia မှာက အနောက်တိုင်း နိုင်ငံများထက် ရရှိငွေ နည်းတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ အကယ်၍ Freelance ကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ဒါကလည်း အကောင်းဆုံး Online က စီးပွားရေးပါပဲ။
(၅) – အွန်လိုင်း လေလံ စီးပွားရေး
မိမိ မှာ ရှိတဲ့ တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်း တစ်ခုခုကို အွန်လိုင်းမှာ တင်ပြီး လေလံစနစ်နဲ့ ရောင်းမလား ၊ ၀ယ်မလား ? ဒါကို လုပ်နေတဲ့ ဆိုက်တွေကလည်း တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ နေ့ စဉ် လေလံ တင်သူ ၀ယ်သူ ဈေးပြိုင်သူစသဖြင့် တော်တော်များများ ပါဝင်ပြီး ဈေးကစားနေကြတဲ့ အွန်လိုင်း စီးပွားရေး တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ Ebanking System ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သူက အွန်လိုင်းကနေ မိမိဘဏ်အကောင့်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်လို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မိမိမှာရှိတာ ရောင်းမလား ၊ သူများလေလံတင်တာ ၀ယ်ပြီး ပြန်ရောင်းမလား ။ ဖြစ်လာမှာပါ။ နာမည်ကြီး ဆိုက်တွေ ဖြစ်တဲ့ Ebay နဲ့ Amazon မှာလည်း ဒီလို စီးပွားဖြစ်နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။
(၆) – E-commence Store ခေါ်တဲ့ Online Shopping
သူကလည်း အွန်လိုင်းကနေ ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းရင် ပိုက်ဆံရှာ နိုင်တဲ့ Online Business ပါပဲ ။ တော်တော်များများတော့ သိကြမှာပါ ။ အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် လုပ်ကြတယ် ။
အရင်ဆုံး ဆိုက်တစ်ခု လုပ်ရတယ်။ အများဆုံးကတော့ Facebook မှာ Page တွေအဖြစ်
တွေ့ ရမှာပါ ။ E banking လိုအပ်နေသေးတဲ့ ကာလတစ်လျှောက်လုံးကတော့ ဈေးဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူကြား ကသိကအောက် ဖြစ်စရာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ Online Shopping ဆိုက်က ဝဘ်ဆိုက် နဲ့E banking ကို တစ်ခါထဲ ချိတ်ဆက်ထားပြီး မိမိ ဘဏ်အကောင့်နဲ့ တစ်ခါထဲ ရောင်းဝယ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ လိုချင်တာကို အော်ဒါ မှာပြီးရင် Door to door ရောင်းဝယ်တာ မျိုး ဒါမှမဟုတ် မှာထားပြီး ငွေသွားရှင်းရတာမျိုးဆိုတဲ့ အခြေအနေပဲ ရှိပါသေးတယ်။ဥပမာ http://www.omyanmar.com/ နဲ့http://www.bestmyanmardeal.com/ တို့ ကို လေ့လာကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်သလောက် အချိန်ပေးနိုင်သလောက် ထိုက်တန် ၀င်ငွေလည်း ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပြည့်ပဲလုပ်လုပ်၊ အချိန်ပိုင်းပဲလုပ်လုပ် ဒါက သင်နဲ့ ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတာ တစ်ခုက အိမ်ကနေလုပ်ရတဲ့ ဒီလို အလုပ်လေး တွေ အတွက် ဘယ်လောက် အချိန်ပေးနိုင်တာ ၊ ဘယ်လောက် လုပ်နိုင်တာက ကန့်သတ်ချက် မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အကောင်းဆုံး ဆန်းသစ်တဲ့ ဖန်တီးမှုတွေ ကို ဘယ်လိုပေးနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ Creation ကသာ သင့်အတွက် ကန့်သတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းကနေ အလုပ်လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေက ထောင်သောင်းမက ရှိပါတယ်။ မိမိတို့အိုင်ဒီယာ ရှိတဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီးသာ ကွဲပြားကောင်း ကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်။
12:21:00 PM Myanmar News Updates No comments
စမုံနက်ရဲ့ အရသာကိုလူတိုင်းမကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စမုံနက်က အမျိုးသမီးများ လစဉ် ဓမ္မတာမလာမီ ကိုက်ခဲခြင်းကို ကျော်လွန်စေနိုင်ပါတယ်။ စမုံနက်က အမျိုးသမီးများမှာရှိတဲ့ လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟိုမုန်းဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေး ပါတယ်။ အမျိုးသမီးထုရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းက ဓမ္မတာမလာမီ ကိုက်ခဲခြင်းက သူတို့ရဲ့ ဘ၀အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီံထက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်တိုလွယ်နေတတ်ပြီး စိတ်ကျ ဝေဒနာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားနေရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက နွယ်ချိုလိုအရသာမျိုးရှိတဲ့ အစေ့တွေကို စားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများရဲ့ စိတ်အားငယ်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်ချင်း စတဲ့ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေပြီး အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်။
၀န်ထမ်းနယ်ပယ်မှာလဲ အမျိုးသမီးထုရဲ့ အင်အားက မသေးတာမို့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပျက်ရက်တွေနဲ့ ထုတ်ကုန်တွေလျော့နည်း ရတဲ့အတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရိုက်ခတ်မှုနေနဲ့ နှစ်စဉ် တစ်နှစ်ကို ပေါင်၃၀၀၀ လောက် ဆုံးရှုံးပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဝါးမှီဝဲပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်တာတွေ ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးတွေလဲ တွေ့ရပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံက သိပ္ပံပညာရှင်တွေက စမုံနက်ကို အမျိုးမျိုးသော ဆေးဖော်စပ်ရာ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ Urmia တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာသူ Hassan Pazoki က “စမ်းသပ်မှု (၈)ပတ်အကြာအပြီးမှာတော့ ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်မှု လျော့ကျသွားပြီး ဒီ့အတွက်ကြောင့်ပဲ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကို ပြန်လည်အာရုံစိုက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ မိသားစု ၊ သူငယ်ချင်းမိဆွေတွေနဲ့လဲ ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ ကြတယ်” လို့ ပြောသွားပါတယ်။Ref:mailOnline
12:17:00 PM Myanmar News Updates No comments
စနေနေ့ညက နယ်စပ်မြို့ မဲဆောက်မှာပြုလုပ်တဲ့ ထိုင်း-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး တန်ဆောင်တိုင်ပွဲနဲ့ မီးမျှောပွဲ(လွိုင်းကထုံး) အထိမ်းအမှတ် မယ်ရွေးပွဲ မြင်ကွင်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီပွဲကို မြ၀တီမြို့က အလှဆုံးတွေထဲက ၁၀ ဦး လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါတယ်။ မသိမ့်သိမ့်စိုးသိန်း -ပထမ မပိုးဇာခြည်ကျော် -ဒုတိယ မခိုင်ဇာဇာအောင် -တတိယ ရရှိကြပါတယ်။ ဒီပွဲကို မဲဆောက်မှာရှိတဲ့ ထာ့စိုင်လို့ဝပ်အပိုင် မြူနီစပါယ်အဖွဲ့က ပြုလုပ်တာပါ။ ထိုင်းနဲ့မြန်မာအလှမယ်ရွေးပွဲကို တရက်ခြား ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ထိုင်းမယ်ရွေးပွဲကိုတော့ တနင်္ဂနွေညမှာ ကျင်းပါတယ်။ ရက်ခြားပေမဲ့ ဆုကြေးငွေကတော့ အတူတူပါပဲ။ ပထမ ဘတ် ၁၀၀၀၀ ဒုတိယ ဘတ် ၇၀၀၀ တတိယ ဘတ် ၄၀၀၀ - ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးဆုဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်ပေးတဲ့ဆုအတွက်ကတော့ ဘတ် ၃၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
11:04:00 PM Myanmar News Updates No comments
10:46:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဦးဟုတ်စိန်အဘိဓာန်မှာတော့ The Indian Brithwort (*Atistolochiaindica)* သာမညဣဿရီတဲ့။
ရှမ်းဘာသာကတော့ ၀မ်လီနုတ်ယုံး *(၀၊ခ်ေလီခေူဂ့်ယုင်း*) လို့ခေါ်ပြီးတရုတ်အခေါ်ကတော့ *ခုံ့ရှော့တန်း* လို့ခေါ်တယ်။
အပင်ကတော့ အစိမ်းရောင် နွယ်ပင်တစ်မျိုးပါ။ ခွာညို၊ ခွာဖြူပန်းလိုအိမ်မှာအလှစိုက်ထားလေ့ရှိတယ်။
အပွင့်က ဥဒေါင်းငှက်နဲ့ ဆင်တူပြီးအဖြူ။ အ၀ါ၊ အစိမ်း၊ ခရမ်းရောင် အနဲငယ်သမ်းနေတယ်။
အသီးကတော့ ကင်းမွန်သီးလိုခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပြီးအရစ်(အရေးအကြောင်း) အမြောင့်ပါတယ်။ အရွက်ရဲ့ အရသာကတော့ နဲနဲဖန်သလိုလို၊ ကွမ်းရွက်ကဲ့သို့လဲအနည်းငယ် ရှိန်းသလိုလိုဖြစ်ပြီးအရသာပေါ့တယ်။
ဘီပိုးရောဂါ၊ စီပိုးရောဂါရှိသူများအတွက် မကြာခင်ကသိရတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက်ပါ။
ဒီဆေးအကြောင်းကို မန္တလေး၊ ကျွဲဆည်ကန်နေနန်းမွေဖေါင် (2nd Year Law) ကနေတဆင့် သိရခြင်းပါ။
သူမအဖေရဲ့ မန္တလေးမိတ်ဆွေတစ်ဦးဘီပိုးရောဂါဖြစ်ပြီးယိုးဒယား၊ စင်္ကာပူအထိသွားကုတာသိန်းပေါင်းများစွာကုန်ပေမယ့် ရောဂါကမပျောက်ဖြစ်နေတယ်။
စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ မန္တလေးကိုရောက်တော့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ကဣဿရမူလီကိုသုံးကြည့်ခိုင်းတယ်။
သူလည်း (၃)လလောက် အဲဒီအရွက်ကိုအစိမ်းလိုက် တစ်နေ့ (၃)ခါ၊ တစ်ခါ လေးရွက် ငါးရွက်လောက် ၀ါးစားပြီး ရေသောက်လိုက်တယ်။
နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ အသားအရေလည်းအရင်လိုနီကြောင်ကြောင် နီရဲရဲမဟုတ်တော့ပဲအသားအရည်တွေ ၀င်းလာတယ်။ ကြည်လာတယ်။
ကျန်းမာရေးလည်းတော်တော်ကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်။ နောက် (၅)လ ကြာတော့ သူယိုးဒယားကိုဆေးစစ်သွားတော့ ဟိုကဆရာဝန်တွေက အံ့သြစွာနဲ့ သူ့ရဲ့ ဘီပိုးရောဂါ လုံးဝပျောက်သွားကြောင်း၊ ဘာဆေးတွေ သုံးကြောင်းမေးလာတော့ သူကတိုင်းရင်းဆေးဣဿရမူလီဆေးကိုသုံးကြောင်းပြောလိုက်တယ်။
(၁) အကောင်းဆုံးကတော့ အရွက်စိမ်းကို ၀ါးစားပြီး ရေသောက်တာပိုထိရောက်တယ်။ (၂) သုံးခွက် တစ်ခွက် ကြိုသောက်ရင်လည်းရပါတယ်။ (၃) အရွက်ကိုအခြောက်လှမ်းပြီးလက်ဖက်ရည် သောက်သလိုမျိုးသောက်ရင်လည်းရတယ်တဲ့။
ဓါတ်ပုံကိုလားရှိုးမြို့ ရပ်ကွက် (၆) ရွှေလီကျောင်းအနီး၊ ဒေါ်နန်းရွှေကျောင်းအိမ်မှာသွားရိုက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။
ဣဿရမူလီမှတဆင့် ဘီပိုးအတွက် စီပိုးအတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက်အဖြစ် ဆက်လက် တိုးတက်အောင် ဖေါ်ဆောင်နိုင်ပါစေ။
*သင်ရဲ့ မိတ်ဆွေထံဆက်လက် လက်ဆင့်ကမ်းပြီးဘေသဇ္ဇဒါန (ဆေးအလှူ) အဖြစ် ကုသိုလ်ယူကြပါရန် . . . . *
ကိုထွန်းလွင် ( သုတဘုံ )
10:39:00 PM Myanmar News Updates No comments
10:37:00 PM Myanmar News Updates No comments
10:34:00 PM Myanmar News Updates No comments
Viber v4.0.0.1707 For Android 13MB / ၀ယ်ရတဲ့ Viber stickers များ
viber ဆိုရင် သိပ်မရှင်းပြထိတော့ပါဘူး 12 ရက် 11လ မှာအသစ်ထွက်လာတဲ့ ဗားရှင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဗားရှင်းအသစ်မှာ stickers အသစ်လေးတွေ အများကြီးပိုလာပါတယ်
ဒီဇိုင်းလည်းပြောင်းသွားပါတယ် တော်တော်လန်းတယ်ဗျာ သူငယ်ချင်းတို့ အကြိုက်တွေ့မှာပါ
Play Store မှာ ယူမရသေးရင် အောက်ကလင့်မှာရယူုနိင်ပါတယ်
ဒေါ်လာနဲ့ပေးရတဲ့ stickers လေးတွေကို
ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် stickers အသုံးပြုတဲ့
ဒေါင်းရတဲ့ ဖိုင်ကို Extract လုပ်လိုက်ပါ သူကို ဓာတ်ပုံ ပို့တဲ့ နေရာ နေသာ ပို့လို့ရပါတယ်
free ၀ယ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မြန်မာမိုဘိုင်း ဂရုမှာတင်ထားတဲ့ပို့လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
အဲ့ဒါလေးပါ ။ Feeedom လို့ပြောရင် သိတဲ့သူတွေ သိကြမှာပေါ့ ။ Version အသစ်လေးပါ ။ လက်ရှိ Play store အထိ အလုပ်လုပ်ပါတယ် ။ အရင်ကလို app တိုင်းကိုတော့ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ။ Viber ကိုတော့ရတယ် ။ Rooted ဖုန်းဖြစ်ရပါမယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံက Play store နဲ့ အလုပ်လုပ်လား မလုပ်လားတော့ ကျွန်တော်က ပြည်ပမှာမို့ မစမ်းဖူးပါ ။ အဲ့ကောင်လေး အင်စတောလုပ် ။ ဖွင့် ။ Root access ပေး ။ ပြီးရင် Menu key ကိုနှိပ် ။ Start လုပ် ။ ပြီးရင် Viber ကိုသွား ။ Sticker ၀ယ် ။ ၀ယ်တဲ့အခါ သူက Free card xxx ဆိုပြီး ဖြည့်ပေးထားမယ် ။ Buy ကိုနှိပိလိုက်ရင် Purched error ဖြစိသွားမယ် ။ ပြီးရင် Buy ကိုထပ်နှိပ်ကြည့် ။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နေပါပြီ ။
ဒေါင်းချင်တာတွေ ကုန်ပြီဆိုရင် Freedom ကိုပြန်သွား ။ Menu နှိပ် ။ Stop လုပ် ။ အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော် ။ Stop မလုပ်ပဲ ဒီတိုင်းထားလိုက်ရင် Play store ကို ၀င်လို့မရတော့ဘူး ။ Freedom ကို Uninstall လုပ်ပစ်ရင်တောင်မရဘူး ခင်ဗျ ။ Stop လုပ်ကိုလုပ်ပေးပါ ။
အဆင်ပြေတာ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် https://www.facebook.com/groups/mmua.mobile/permalink/566689973413549/ မှာ ကွန်မန့်ပေးပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
Viber v4.0.0.1707 For Android 13MB / ၀ယ်ရတဲ့ Viber...